मोटरसाइकल दुर्घटना परेका काठमाडौँका एक १९ वर्षीय विद्यार्थीलाई अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याइयो । अस्पतालमा ल्याइपुर्याउँदा उनको रक्तचाप न्यून हुनका साथै पेट फुलेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनको कलेजो फुटेको र कलेजोबाट रगत बगिरहेको देखियो । विशेषज्ञहरूको
बच्चाको ग्रोथ एण्ड डेभलप्मेन्टका अवरोधक
चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ – विश्वस्वास्थ्य संगठनले न्यूमोनिया, झाडापखाला र पोषणको अभावका कारण विश्वमा धेरै बालकालिकाको मृत्यू भएको उल्लेख गरेको छ । बालबालिकाको मृत्यू गराउने मुख्य कारक तत्वमा न्यूमोनिया रहेको छ । – बच्चालाई कुन उमेरमा कस्तो
क्रित्रिम जोर्नी प्रत्यारोपणः यसरी पुग्छ सबैको पहुँच
कृत्रिम जोर्नी प्रत्यारोपण भनेको के हो ? यो रोग होइन । कुनै कारणले घुँडा वा हिप बिग्रिएर हिँड्न नसकेको अवस्थामा बिरामीमा कृत्रिम जोर्नी राखी शरीर सहज तरिकाले चलाउन सकिने बनाउनु नै जोर्नी प्रत्यारोपण हो । कृत्रिम जोर्नी
न्यूरो सर्जरीमा यहाँको करियर बारे बताइदिनुस न ? मैले न्यूरो सर्जरी सेवा शुरु गरेको २७ वर्ष भइसकेको छ । शुरुमा बीर अस्पतालबाट काम शुरु गरेको थिएँ । सन् १९८७ मा डा. उपेन्द्र देवकोटा नेपाल फर्केर आएपछि मैले
नर्सिङ शिक्षालाई नै किन छान्नुभयो ? नर्सहरु सेतो पहिरनमा सजिएर हिँडेको देख्दा नर्सिङ सफा र स्वच्छ पेशा हुने जस्तो लाग्यो । यो एउटा विशुद्ध सामाजिक कार्य पनि हो । बिरामीको सेवा गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टी मिल्छ जस्तो लागेर
कलेजोको समस्याले पनि पाइल्स
दिसा गर्ने ठाउँ (मलद्धार) का नसाहरु बिस्तारै फूलेर हुने मासुको डल्लोको आकारलाई पाइल्स भनिन्छ । यसले मलद्धारबाट निस्कने दिसाको बाटोमा अवरोध गर्छ र व्यक्तिलाई सत्रुले दिएको जस्तो पीडा दिन्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा हेमोरोइड्स र आयुर्वेदमा अर्स
सरकारको साथ र सहयोग भएमा स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ बाथ रोगका जनशक्ति
चिकित्सकहरु नगन्य छन् । दुर्गम ठाउँमा उपचारको पहुँच पुग्न सकेको छैन । फेलोसिप कोर्षका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने बाद्यता छ । बाथको औषधिले असर गर्न सक्ने भएकाले चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम वर्षमा एक वा दुईपटक कलेजो, मिर्गौलालगायतका अंगको
नर्सिङ प्रतिको आकर्षण कसरी भयो ? मेरो घर सोलुखुम्बु सल्लेरी हो । गाउँको मान्छे भएकाले हस्पिटलमा सेतो एप्रोन लगाएर नर्सले काम गरेको देख्दा नर्स बन्ने मरहर जाग्यो । परिवारको सपोर्ट भएको र समाज सेवामा चासो बढेकाले नर्सिङमा
बिमला कोइराला साइक्याट्रिक (मानसिक) विभागकी सिस्टर इन्जार्च हुनुहुन्छ । नेपाल मेडिकल कलेजमा १९ वर्षदेखि कार्यरत कोइराला विगत ८ वर्षदेखि यो विभागमा हुनुहुन्छ । मानसिक असन्तुलन भएका बिरामीहरुलाई साइक्याट्रिक (मानसिक) विभागमा राखेर उपचार गरिने भएकाले यो अलि चुनौतिपूर्ण
डा. श्रेष्ठ (एमडी) सिद्धि पोलि प्याथ ल्यावको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरी कस्तुर्वा मेडिकल कलेज मनिपालबाट प्याथोलोजीमा एमडी गर्नुभएका डा. श्रेष्ठ विगत ४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सिद्धि पोलि प्याथ ल्यावमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।